Item No .: MS-RE1520-RGB
Midabkani wuxuu bedelayaa rgb halo nalalka Jeep Renegade 2015-2021 waxay la timid DOT Emark oo la oggolaaday, xakamaynta app RGB iyo cabbir yar oo ah khidmadda maraakiibta caalamiga ah ee raqiiska ah.
Our Jeep Nalalka laydhka ee Renegade waxay si weyn u hagaajin kartaa masaafada saadaasha iftiinka iyo muuqaalka guud, waxay la yimaadaan 3 qaab oo iftiin ah oo ay ku jiraan dogob sare, dogob hoose iyo halo giraanta drl. Saameynta midabka ee giraanta halo, qaabka x iyo xiddiglaha waxaa lagu xakameyn karaa barnaamijka taleefanka. Guryaha aluminiumka ah ee ka samaysan diil-kabka ayaa leh astaamaha qaboojinta hufan, xoog weyn iyo culeys khafiif ah, miridhku iyo ka-hortagga, guryaha shaabadaysan iyo IP67 aan biyuhu lahayn. Midabka beddela rgb halo nalalka loogu talagalay Jeep Renegade waa DOT iyo Emark la ansixiyay kuwaas oo sharci ku ah wadada, way fududahay in la rakibo, oo ku habboon 2015-2021 Jeep Dib -u -celin
faahfaahinta of Jeep Laydhka laydhka ee Renegade
Number Model MS-RE1520-RGB
Dhererka 250.4mm / 9.86inch
qoto 203.6mm / 8.02inch
color Heerkulka 6000K
Power 34W Beam Sare, 20W Beam Hoose
Lumen 2600lm dogob sare, 1400lm dogob hoose
Tilmaamaha Halo Lights for Jeep khawaarij
DOT La Ogolaaday: Kuwani nalalka laydhka leh ee la ansixiyay ee DOT waxay dammaanad qaadayaan in laydhkaagu hore u hoggaansan yahay Waaxda Gaadiidka ee Maraykanka si sharci ahaan loogu wado waddada Maraykanka iyo Kanada.
Naqshad Gaar ah: 12 kumbiyuutar oo xiddig leh iyo qaab “X” oo leh giraanta Halo. Mashruuca mashruuca iyo isku -duwaha iftiinka, hubi in ilaha nalalku ay maraan daboolka si heer sare ah u gudbinta, ka dhig kuwa joogga iftiinka mid aad u xoog badan. 3 Waqti ka iftiimaya nalalka halogen -ka ee kaydka ama nalalka kale ee la midka ah ee qarsoon, waxay ku siin doontaa waayo -aragnimada wadista ugu fiican.
Iftiimin Sare: dogob sare @2600LM dogob hoose @1400LM saafi cad oo ah 9 inji oo laydhka laydhka leh oo leh nalal soconaya maalintii (DRL). Dhex-dhexaadinta suunka ka-hortagga ka-hortagga Xariijin goos goos ah oo leh qaab beel halo ah oo kaamil ah ayaa bixisa iftiin ka sii badan, iyada oo aan la indho-tirayn darawalada kale iyada oo la siinayo aragtida ugu iftiinka badan.
Tayada Joogtaynta: Biyo -La'aanta Wanaagsan oo leh 3 waalka dib -u -cusboonaysiiyay xagga dambe si looga fogaado ceeryaamo inay gasho laydhka hore. Guryaha aluminium-ka-shubka ah iyo muraayadda polycarbonate-ka-xoqidda ayaa si weyn u kordhin doona nolosha shaqada ee nalalka hore ilaa in ka badan 50,000 oo saacadood.
2021 Jeep khawaarij
2020 Jeep khawaarij
2019 Jeep khawaarij
2018 Jeep khawaarij
2017 Jeep khawaarij
2016 Jeep khawaarij
2015 Jeep khawaarij